ကြားသိရသမျှ Archives - Newposts
အကြွေး ၇၅၀၀၀ ကြောင့် ဆံပင်လာရောင်းတဲ့ ကောင်မလေးကို ၂၅၀၀၀ ပဲရမယ်လို့ ပြောလိုက်သောအခါ…
June 21, 2022 newposts2021 0
အကြွေး ၇၅၀၀၀ ကြောင့် ဆံပင်လာရောင်းတဲ့ ကောင်မလေးကို ၂၅၀၀၀ ပဲရမယ်လို့ ပြောလိုက်သောအခါ… အကြွေး (၇၅၀၀၀) ကြောင့် ဆံပင်ကို ဖြတ်ရောင်းတဲ့သူလေး အလှူလေးတစ်ခု ပြုမိတယ်။အကြွေး ၇၅၀၀၀ တင်လို့ဆိုပြီး ၊သတ်သေချင်စိတ်ပေါက်နေပီ ပြောပြီး သူ့ ဆံပင်လေး လာရောင်းပါတယ်။ တစ်ကယ် ဖြတ်ရောင်း မရောက်းသိချင်လို့ […]
ဦးဖိုးအေးတို့ မိသားစု သင်္ချိုင်းထဲ မှာ ပေါက်တဲ့ မျှစ်ကို ချိုးယူပြီး စားလိုက်မိကြသောအခါ.
June 20, 2022 newposts2021 0
ဦးဖိုးအေးတို့ မိသားစု သင်္ချိုင်းထဲ မှာ ပေါက်တဲ့ မျှစ်ကို ချိုးယူပြီး စားလိုက်မိကြသောအခါ. သင်္ချိုင်း ဆိုသည်မှာလူတစ်ယောက်က မေးတယ်…“ကိုဖိုးအေး ခင်ဗျား သင်္ချိုင်းထဲက မျှစ်တွေ ယူစားနေတာ မရွှံဘူးလား… ဖြေ။ ။”ဘာရွှံမလဲကွ လူသေကောင်က ထွက်တဲ့မျှစ်မှ မဟုတ်တာ မြေကြီးထဲက ထွက်တဲ့မျှစ်ပဲ ဘာရွှံစရာရှိလဲ သင်္ချိုင်းဆိုတာလဲ […]
တစ်နိုင်ငံလုံးပထမ အမှတ်အများဆုံး မန္တလေးအထက-၁၆ ကျောင်းမှ ကျောင်းသူ မအိမ့်မှူးခင်
June 18, 2022 newposts2021 0
၀၂၂တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲအောင်စာရင်း တစ်နိုင်ငံလုံးပထမအမှတ်အများဆုံး ဘာသာစုံဂုဏ်ထူးရ (အမှတ်ပေါင်း၅၅၈မှတ်) သည့် မန္တလေးတိုင်း ချမ်းအေးသာဇံမြို့နယ် အထက-၁၆ ကျောင်းမှ ကျောင်းသူ မအိမ့်မှူးခင် ဇြန္လ ၁၇ ၂၀၂၂တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲအောင်စာရင်း တစ်နိုင်ငံလုံးပထမအမှတ်အများဆုံး ဘာသာစုံဂုဏ်ထူးရ (အမှတ်ပေါင်း၅၅၈မှတ်) သည့် မန္တလေးတိုင်း ချမ်းအေးသာဇံမြို့နယ် အထက-၁၆ ကျောင်းမှ ကျောင်းသူ မအိမ့်မှူးခင်က ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ […]
မိုင်းဖုန်းဆရာတော်ဘုရားကြီး အဓိဌာန်ပြီးမြောက်၍ ဂူတွင်းမှ ထွက်လာမည့်ရက်ကို သိရပြီ…
June 17, 2022 newposts2021 0
မိုင်းဖုန်းဆရာတော်ဘုရားကြီး အဓိဌာန်ပြီးမြောက်၍ ဂူတွင်းမှ ထွက်လာမည့်ရက်ကို သိရပြီ… မိုင်းဖုန်းဆရာတော်ဘုရားဂူထွက်တော်မူခါနီးပါပြီ။ ဘာသာပြန်သူတောင် ကြက်သီးထတဲ့ ဂူထဲကအတွေ့အကြုံရေးလာတဲ့ မိုင်းဖုန်းဆရာတော်ရဲ့စာ။ သာသနာတော်နှစ် ၂၅၆၆ ခု နယုန်လဆန်း ၁၅ ရက် (13.6.2022) မဟာမုနိဓမ္မဟိန်းမိုင်းကျက်ဂူမှ သားတပည့်အပေါင်း၊ အနယ်နယ်အရပ်မှ ဒကာဒကာမအပေါင်းတို့ထံ ပေးပို့သော မိုင်းဖုန်းဆရာတော်ဘုရား၏ မေတ္တာစာ။ ဆရာတော်လည်း […]
သူဌေးလောငျးတို့အတှကျ ထိုငျးထီ ခြဲလျ ၃ လုံး တိုကျရိုကျထုတျလှငျ့မှု မကွညျ့အားသေးရငျ ရှယျထားကွနျော…
June 16, 2022 newposts2021 0
လောကီပညာကို လိုကျစားကွသော မွနျမာဆရာမြား၌ တဈခါတဈရံ ဆရာဆရာအခငျြးခငျြး ပညာကို ဖလှယျသော အလအေ့ထ ရှိတတျကွ၏ ထိုသို့ တဈဦးအား ပေးအပျကာ လဲလှယျကွရာ၌ ရှေးဦးစှ မိမိရှာဖှတေတျ သိထားသမြှ ပညာရပျမြားတှငျ အကောငျးဆုံးနှငျ့ ကိုယျတှမှေ့နျကနျသော ပညာမြားကို သာပေးပါမညျ… မဟုတျမမှနျ လုပျကွံ၍ ပေးခဲ့မိလြှငျ ယခုတတျထားသမြှ […]
မြန်မာနိုင်ငံမှာ Starlink ဂြိုလ်တုအင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှု ဖြန့်ချိဖို့ စီစဉ်နေတဲ့ အီလွန်မတ်စ်
June 15, 2022 newposts2021 0
မြန်မာနိုင်ငံမှာ Starlink ဂြိုလ်တုအင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှု ဖြန့်ချိဖို့ စီစဉ်နေတဲ့ အီလွန်မတ်စ် မြန်မာအပါအဝင် အရှေ့တောင်အာရှဈေးကွက်ထဲ ဝင်ရောက်ဖို့ စီစဉ်နေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ သူဌေးကြီး အီလွန်မတ်စ်ပိုင် Starlink ဂြိုလ်တု အခြေပြု အင်တာနက် ဝန်ဆောင်မှုဟာ လာမယ့်နှစ်က စပြီး မြန်မာအပါအဝင် အရှေ့တောင်အာရှ ဈေးကွက်ထဲ ဝင်ရောက်ဖို့ စီစဉ်နေတယ်လို့ […]
မြို့နယ်အသီးသီးရှိ ငွေသားထုတ်ယူနိုင်သော KBZ ATM စက်များ၏ စားရင်းအား တရားဝင်ကြေညာ
June 10, 2022 newposts2021 0
မြို့နယ်အသီးသီးရှိ ငွေသားထုတ်ယူနိုင်သော KBZ ATM စက်များ၏ စားရင်းအား တရားဝင်ကြေညာ ကမ္ဘောဇဘဏ်သုံးစွဲသူCustomer များအနေဖြင့်ဇွန်လ၉ ရက်နေ့ ၂၀၂၂ ခုနှစ်မှစတင်ပြီးသတ်မှတ်ထားသော ATM များ၌ငွေသားထုတ်ယူနိုင်ပြီဟုသိရပါသည်။ကမ္ဘောဇဘဏ်အနေဖြင့် Customer များ၏ ဘဏ်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရန်အစဉ်ကြိုးပမ်းလျက်ရှိရာ ဇွန်လ ၉ ရက်နေ့ ၂၀၂၂ ခုနှစ်မှစတင်ပြီး သတ်မှတ်ထားသော ATM များ၌ […]
9.6.2022(ကြာသပတေးနေ့) ယနေ့-ရွှေဈေး နှင့် ပြည်တွင်း နိုင်ငံတကာငွေလဲနှုန်းများ
June 9, 2022 newposts2021 0
9.6.2022(ကြာသပတေးနေ့) ယနေ့-ရွှေဈေး နှင့် ပြည်တွင်း နိုင်ငံတကာငွေလဲနှုန်းများ ရန်ကုန်မြို့မှာ ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သော အမေရိကန်ဒေါ်လာငွေလဲနှုန်းသည် အမေရိကန်တစ်ဒေါ်လာလျှင် အရွက်ဈေး ကျပ် 2060~2075 ဝန်းကျင်ဖြစ်သည်။ ဗဟိုဘဏ် ရည်ညွှန်းဈေး ကျပ် 1850 (± 3)ဖြစ်ပါသည်။ အခြားငွေကြေး ငွေလဲနှုန်းများမှာ ယူရို ဒေါ်လာ 2175 ကျပ်၊ […]
ငလငျြနဲ့ ပတျသကျပွီး ကွိုတငျပွငျဆငျဆောငျရှကျသငျ့တဲ့ အခကျြမြား ( အရေးကွီးလာပါပွီ )
June 5, 2022 newposts2021 0
— ငလငျြမလှုပျမီအခြိနျ ကွိုတငျဆောငျရှကျထားသငျ့တဲ့ အခကျြမြားကို ဖျောပွလိုကျပါတယျ- (၁) လေးလံသော ပစ်စညျးမြားကို အမွငျ့တှငျ တငျမထားပါနှငျ့။ ပွုတျကလြာပါက ထိခိုကျဒဏျရာ ရရှိနိုငျပါသညျ။ မှနျပွတငျး၊ တံခါးမြားအနီးတှငျ အိပျစကျခွငျး မပွုပါနှငျ့။ (၂) အိမျ၏ ခွကိုကျဆှေးနသေော အပိုငျးအစမြားကို ပွငျဆငျပါ။ (၃) ဖွဈနိုငျလြှငျ ခေါငျမိုး၊ […]
ယနေ့ မနကျခငျး ရနျကုနျနဲ့ ၇၂ မိုငျအကှာ ပဲခူးတိုငျး၊ သာယာဝတီမွို့တှငျ ငလငျြလှုပျခတျခဲ့
ပဲခူးတိုငျး၊ သာယာဝတီမွို့နယျကို ဗဟိုပွုပွီး ရဈခကျြတာစကေး ၄ ဒသမ ၃ အဆငျ့ရှိ မွငေလငျြ တဈခုလှုပျခတျသှားတယျလို့ နိုငျငံတကာငလငျြစောငျ့ကွညျ့ရေးအဖှဲ့မြားထံမှ သိရှိရပါတယျ။ ဇှနျလ ၅ ရကျနေ့ နံနကျ ၀၀ နာရီ ၀၃ မိနဈအခြိနျတှငျ မွငေလငျြ လှုပျခတျသှားခွငျးဖွဈပွီး အနကျ ၁၀ ကီလိုမီတာ […]